AQRISO: Warbixinta rasmiga ah ee Man United, hadalkii uu jeediyey Ed Woodward iyo Jose Mourinho oo isna hadlay – Gool FM
AQRISO: Warbixinta rasmiga ah ee Man United, hadalkii uu jeediyey Ed Woodward iyo Jose Mourinho oo isna hadlay
Kaafi May 27, 2016
(Manchester) 27 Maajo 2016. Man United waxa ay si rasmi ah u shaacisay magacaabida Jose Mourinho.
Kaddib markii uu magacaabida Mourinho ku dhawaaqay, ku xigeenka madaxa fulinta Manchester United Ed Woodward waxa uu yiri: “Jose Mourinho hada waa tababaraha ugu wanaagsan ciyaaraha. Waxa uu ku guuleystay koobab isaga oo dhiiri galiyey ciyaaryahano guud ahaan Yurub, dabcan, waxa uu si fiican u garanayaa Premier League, isaga oo halkan ku guuleystay saddex horyaal.
“Waxaan jeclahay in aan fursadan uga faa’ideysto in aan ku soo dhoweeyo Manchester United. Soyaalkiisa guusha ayaa ka dhigeysa in uu hore u soo dhaqaajin karo kooxda.”
Jose Mourinho oo isna magacaabistiisa ka hadlay waxa uu yiri: “In aad noqoto tababaraha Manchester United waa wax ciyaaraha sharaf ka ah. Waa koox laga yaqaan dunida oo la jecelyahay. Waxa ay leedahay haykal iyo muxubo aysan koox kale gaari karin.
“Mar waliba Old Trafford in wax na xiriiriyo jiro ayaan dareemi jiray; waxa ay marti galisay xusuuso muhiim u ah waayahayga, mar walba si weyn ayaan ula raaxeysan jiray jamaahiirta United. Waxan sugayaa noqoshada tababarahooda aniga oo ku raaxeysan doona taageeradooda sanadaha soo socda.”
DEG DEG: Man United oo xaqiijisay inay saddex sano ka saxiixatay Jose Mourinho
TOOS: Fal celinta taageereyaasha faraxsan ee Manchester United kaddib magacaabidii Jose Mournho